सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, देखेर पनि नदेखेको जस्तो नगर्नु होला ॐ लेखेर एक SHARE गर्नुस अधुरो काम बन्नेछ। - Kohalpur Trends
The submit सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, देखेर पनि नदेखेको जस्तो नगर्नु होला ॐ लेखेर एक SHARE गर्नुस अधुरो काम बन्नेछ। appeared first on The Buddha Khabar.
Previous Previous post: उदाउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएपछि सकियो छठ
Next Next post: चोखो मनले लाख बती बालेको फोटोलाई छोएर ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस सारा दुख पाप काटिनेछ ॐ ॐ ॐ !!!
पिकअप भ्यान दुर्घटना : दुई जनाको शव भेटियो, एक जनाको खोजी जारी
११ मंसिर, चितवन । प्युठानबाट बिरामी बोकेर काठमाडौं जाँदै गरेको पिकअप भ्यान त्रिशूली नदीमा खस्दा बेपत्ता भएका तीन जनामध्ये दुई जनाको शव फेला परेको छ…